Hub isugu jira bistoolado iyo rasaas oo lagu qabtay dekedda magaalada Boosaaso – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Hub isugu jira bistoolado iyo rasaas oo lagu qabtay dekedda magaalada Boosaaso
Wararka naga soo gaaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxay sheegayaan in ciidamada ilaalada dekedda Boosaaso ay maalintii shalay gacanta ku dhigeen hub fudud iyo rasaas lagu soo dhex-qariyay raashin iyo baakado timir ah.
Hubkaasi la qabtay ayaa gaarayay ku dhawaad 20 bistooladood iyo rasaas tiro badan oo la sheegayo inay siday dooni ka timid dalka Yemen, waxayna ciidamadu xireen ninkii ganacsadaha ahaa ee hubka sitay, inkastoo aan weli ciidamadu soo bandhigin magaca ninkaasi la qabtay.
“Waxaa hubkaan lagu soo qariyay daasado caano-booro ah, baakado iyo kiishash timir ah, waxayna isugu jiraan bistooladaha loo yaqaan Biljamka iyo nooca dhabanacasta ah, waxaa loo waday hab ganacsi” Sidaas waxaa yiri sarkaal ka tirsanaa ciidamada ilaaladda dekedda Boosaaso oo magaciis diiday in warbaahinta loo isticmaalo.
Dhinaca kale, taliska ciidamadda booliiska ee gobolka Bari ayaan weli ka hadlin hubka lagu qabtay dekedda Boosaaso, tiradiisa iyo wax laga yeelayo.
Ma ahan markii ugu horeeysay oo dekedda magaalada Boosaaso lagu qabto hub fudud oo la doonayay in si sharci darro ah magaalada lagu soo geliyo.
Tan iyo markii uu qarxay dagaalka dalka Yemen waxaa degaamadda Puntland kusoo qul-qulayay hub fudud, kaasi oo si kotorobaan ah loogaga soo dejiyo xeebaha Puntland.
Hubkaasi ayaa markii lasoo geliyo magaalada Boosaaso waxaa loo adeegsadaa in lagu fulliyo dilalka qorshaysan ee lagu bar-tilmaameedsanayo saraakiisha sare oo ka tirsan maamulka Puntland iyo dadka kale ee shacabka ah.